ကုမ္ပဏီများမှ | Holmbygden.se
ဒီနေရာတွင် Holmes အတွက်ကုန်သည်များကိုတွေ့လိမ့်မည်. ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ဖို့အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်သောသတ္တဝါကျေးလက်အကြိုးရှိ!
သငျသညျ Holmes ကုမ္ပဏီများသိခဲ့ပါ
မက်စ်ပန်းချီ (Holmbygden.se စပွန်ဆာ!)
ပန်းချီနှင့် Wallpaper အတွက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကို. နှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပမှ.
ထိတှေ့: မက်စ် Wikholm 070-669 44 52, max@maxmaleri.se
ဒီပလိုမာမျက်နှာကိုထောက်ပံ့ပေးသူကိုကြော်ငြာအော်ဂဲနစ်အသားအရေစောင့်ရှောက်မှုကုထုံး- နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကုသ, နှင့်ရောင်းချမှုများ 100% အော်ဂဲနစ်အသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန်. စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲအော်ဂဲနစ်အသားအရေစောင့်ရှောက်မှု. သင့်ရဲ့အသားအရေများအတွက်သီးသန့်နှင့်သဘာဝအာဟာရ.
ထိတှေ့: မာသကယျြဝနျး 073-650 52 78, info@ekoskin.se
ငါးဖမ်းစီစဉ်ကြောင်းအဆောက်အဦးအပြင်ကုမ္ပဏီ, အမဲလိုက်, တင်ဆောင်လာသော- နှင့်အခြားသဘာဝအတှေ့အကွုံမြား.
ထိတှေ့: Roland Hultman – 070-222 19 79, r.h@entretrading.com
တက္ကစီဈ Holmes AB
ထိတှေ့: ပညာရှင် Hans Wiklund – 070-273 84 00
မြို့ပြ Andersson တက္ကစီ
ထိတှေ့: မြို့ပြ Andersson – 070-678 99 86
ထိတှေ့: ÖrjanElfström – 070-675 72 22
Lindahl ကြမ်းပြင် & tile AB
ထိတှေ့: ရော်ဂျာ Lindahl 070-602 01 55,
K သည်. Lind ဆောက်လုပ်ရေး
ပြုပြင်မှုများလုပ်ဆောင်, အဆိုပါ superstructure ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် – ကြီးမားသောအငယ်နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်အကိုင်များ.
ထိတှေ့: Krister Lind 073-035 87 23, k.lindbygg@live.se
သောမတ်စ်Sjölund Bygg & Finsnickeri AB
ထိတှေ့: သောမတ်စ်Sjölund – 070-572 58 64, info@sjolundbyggofinsnickeri.se
Norling မာကု & သစ်သား
Utförကျောက်စရစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မြေယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ဝင်ရိုး, ရေနုတ်မြောင်း, VA သို့နှင့်စက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. ကျနော်တို့မြေညီထပ်အများစုသည်. ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်.
ထိတှေ့: Kent Norling 070-342 77 15,
ကို C Lindahl Åkeri Holmes AB
ထိတှေ့: Christer Lindahl – 070-326 76 76
Benny Hultmans ပို့ဆောင်ရေး AB
ထိတှေ့: Benny Hultman – 070-266 82 02
ထိတှေ့: Ola Vesterlund – 070-336 39 94
Österströmညီလာခံ & Kursgård
ဒီနေရာတွင်နေရာထိုင်ခင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, စားသောက်ဆိုင်, လှုပ်ရှားမှုများ, ဖျော်ဖြေရေး M.M..
ထိတှေ့: Tommy Vesterlund – 0692-301 00, tommie@trapatronen.se
Träpatronenပို့ဆောင်ရေး & ခရီးသွားလုပ်ငန်း
တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး, ကုမ္ပဏီများမှ, ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ. အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏ဘတ်စ်ကားများ, အားလုံး alcolock. ဘေးကင်းလုံခြုံလက်၌အတွေ့အကြုံရှိကြေးစားယာဉ်မောင်း.
ထိတှေ့: Tommy Vesterlund – 0692-301 00
Sandnäsbadenစခန်း & စားသောက်ဆိုင်
လှလှပပရေကန် Holmes ချွတ်၏ကမ်းမှာတည်ရှိပြီးတပ် ချ.. ဆိုးသော, အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, minigolf, လှေ, ဂျက်, စည်ပိုင်း, fiske m.m.
ထိတှေ့: Diane Andersson 076-826 89 14, info@sandnasbadenscamping.se
မှတ်တမ်းအခန်း၏ငှားရမ်းခြင်း, ချွေးပေါင်းအိမ်နှင့် whirlpool နှင့်အတူ spa, လှေ, လှုပ်ရှားမှုများ, ဆောင်းရာသီနဲ့နွေရာသီ၏ယပ်လှေများနှင့်အစီအစဉ်.
ထိတှေ့: Eliasson အကြွေး – 070-640 32 84, sunnansjo_holm@hotmail.com
က်ဘ်ဆိုက်: sunnansjo.net (နှင့် holmbygden.se/boende/…)
မြောက်ပိုင်းဆွီဒင် & Co. , – အဖြစ်အပျက် & အတွေ့အကြုံများ
ထိတှေ့: Patrik Lindmark 070-646 69 00, info@norrlandco.se
ကျေးလက်ဒေသမှ RELATED နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ
ထိတှေ့: Börje Albertsson (Liden) 070-347 66 07 alt +. 0692-220 01
Callan Wood က AB – သစ်စက်.
ထိတှေ့: vxl 0691-66 20 00 alt +.
သစ်တောဦးစီးဌာန 0691-66 20 20